Newa Times : नेवार महिला कहिल्यै विधवा हुन्नन्
नेपालमा दैनिक प्रयोजनका लागि कुन संवत् उपयुक्त होला ? यस प्रश्नको उत्तरमा नेपालसंवत् र विक्रमसंवतका पक्षधरबीच लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको छ । कुनै पनि संवतको प्रयोगका लागि भनेर यति लामो विवाद चलेको सम्भवतः संसारमा कहीँ पनि पाइँदैन ।
दिपंखा यात्रा सौर्यमास संक्रान्ति, चन्द्रमास पूर्णिमा, रेवती नक्षत्र, हर्षन योग र चन्द्र ग्रहण यी पाँच कुराको संयोगका अवसरमा सम्पन्न गरिन्छ ।
आफ्नो पहिचान बौद्धको रुपमा गराउने व्यक्तिले न्यूनतम बौद्ध आचरण त पालना गर्नै पर्छ । बौद्धहरुको जीवन चर्या वा जीवन शैली कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न इतर बौद्ध समाजमा स्वाभाविक रुपमा उठ्ने गर्छ र एउटा सच्चा बौद्धले ती प्रश्नहरुको जवाफ दैनिक जीवन शैलीबाट नै दिनु पर्छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा प्रत्येक वर्ष विशेष तामझामका साथ मनाइने जात्रापर्वहरुमा एक येयाः पनि हो । यँयाःलाई इन्द्रजात्रा पनि भन्ने गरेको पाइन्छ तर यो जात्रासँग सम्वन्धित काठमाडौंका नेवारहरु बोलिचालीको भाषामा यँयाः नै भन्ने गर्दछन् । यस अवसरमा काठमाडौं हनुमानढोका वरिपरि विभिन्न साँस्कृतिक गतिविधिहरु भइरहको हुन्छ ।
संस्कृतिका नाममा इन्द्रजात्रालगायत अन्य पर्वमा राज्यले नै मदिराको प्रयोग प्रसादको रुपमा छेलोखेलो गर्ने गर्दछ, जसले राज्य आफ्नै संस्कृति मात्रै नबुझ्ने भनेर त स्पष्ट नै भयो साथसाथै जनताको स्वास्थ्यमा पनि सम्वेदनशील छैन भन्ने कुरा देखाउँछ ।
यो चाड राम्ररी मनाउन सके दशैं पनि राम्रो गरी मनाउन पाउने जनविश्वास रहेको हुनाले यसलाई सकभर राम्ररी मनाउने गरिन्छ । गुँला सकिएको चौथो दिनमा अर्थात चौथिको दिनमा यो चाड मनाइन्छ ।
तीजमा तीज पर्व व्रतसँग सम्वनिधत भएपनि अचेल नेपाली समाजमा यो व्रतभन्दा नाचगानका रुपमा चिनिन पुगेको छ ।
पुरुषहरुका लागि यो पर्व व्रतका लागि नभएर व्रत बस्ने महिला हेर्ने र ती महिलाहरुसँगको नाचगानमा लहसिनेमा नै सीमित रहेको पाइन्छ
नेपालमा मनाइने प्रमुख चाडहरूमध्ये हरितालिका तीज पनि एक हो । यो पर्व भाद्र शुक्लपक्षको तृतीयाको दिनमामनाइन्छ । भाद्रपक्षको चतुर्थीलाई गणेश चतुर्थीको रुपमा मनाइन्छ भने त्यसलगत्तै आउने पञ्चमीलाई ऋषिपञ्चमीको रूपमा हिन्दु महिलाहरू्द्वारा विशेष उल्लासका साथमनाइन्छ ।
नेवार समाजमा प्रचलित अनेकों संस्कृतिहरुमध्ये एक गुँ पुन्हि (क्वाति पुन्हि) श्रावण महिनाकोे जनै पूर्णिमाको दिन मनाइन्छ । यो चाड नौ दिनसम्म मनाइने भएको हुनाले यसलाई नेपाल भाषामा गुँ पुन्हि भनिएका हो । गुँ को अर्थ नेपाल भाषामा नौ हुन्छ । यस्तै गरी नौ थरी गेडागुडी भिजाएर यसको तातो रस खाने दिन भएकोले पनि यस पर्वलाई क्वाति पुन्हि पनि भनिएको हो ।
भाद्र कृष्ण चतुर्दशीको दिन मनाउने गथां मुगः चाडलाई पिशाच चतुर्दर्शी पनि भनिन्छ । चाडहरूको शुरुवातमा मनाइने चाड भएको हुनाले यस चाडलाई काय् मचा नखः (छोराको चाड) पनि भन्ने गरिन्छ ।
जंक्व किन नभएको त ? प्रश्न खस्न नपाउँदै चाउरी परेको अनुहार अझ खुम्चाउँदै र हात पनि पल्टाउँदै सुस्केरा हाल्ने सूरमा भन्छन्– ‘खोई कल्ले गर्दिने ?’
बौद्ध हुनु र नहुनु अथवा को कति स्तरको बौद्ध भनेर जोख्ने मापदण्ड नै माछामासु खानु र नखानुसँग सम्वन्धित गरेर हेरेको पाइन्छ । तर बौद्धहरूले दैनिक जीवनमा पालना गर्नु पर्ने आधारभूत पाँच वटा शीलमा माछामासु खानु हुन्छ वा खानु हुन्न भन्ने कुरा उल्लेख छैन । बरु प्राणी हिंसा गर्दिन वा गर्नु हुन्न भन्ने कुरा परेको छ ।
अधिकांश मन्दिरमा पूजा गर्न आउनेहरुको भीडमा महिला वर्गको वर्चश्व हुन्छ तर त्यहाँ पुजारी भने महिला हुँदैनन् । जहाँ पनि यस्तै दृष्यहरु देखिएपछि पुजारीको रुपमा महिला वर्र्जित वर्ग प्रतीत हुन्छ । तर सम्वन्धित धर्मको मर्ममा लैंगिक विभेद त्याज्य देखिन्छ । आफूलाई धर्माधिकारी भनाउन चाहनेहरु पुजारीमा पुरुष मात्रै किन भन्ने प्रश्नसम्म पनि गर्दैनन् ।
भारतको आन्ध्रप्रदेश राज्यको तिरुमालास्थित तिरुपती बालाजी मन्दिरमा यस वर्ष भक्तजनले चढाएको ६४ हजार ७ सय ६० किलोग्राम कपाल १ सय ७ करोड रुपैयाँमा निलामी भएको छ । तिरुपतीको इतिहासमा यो दोस्रो सबभन्दा ठूलो निलामी हो ।
कुन्डमा स्नान गरेर पुण्य कमाइने विश्वास
नेवार समुदायभित्रका अनेक जातीय समूहहरुमा ज्यापू पनि एक हो । संख्यात्मक र गुणात्मक रूपमा यस जातिको अहं महत्व भएको कुरामा दुई मत नहोला । सामाजिक थिचोमिचो, आर्थिक तथा चेतनाको अभावका कारण तुलनात्मक रूपमा अन्यभन्दा पीछडिनु परेको यस जातिलाई कुनै बेला हेयदृष्टिले हेरिन्थ्यो । तर समाजका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले आफ्नो नामसँगै यो शब्द झुण्ड्याउन थाले पछि र ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछिका संघसंस्थाहरुले यस शब्दको सर्वत्र प्रयोग गर्नाले बल्ल ‘ज्यापू’ शब्दले व्यापकता पाउनुका साथै लोकप्रियता पनि कमाएको देखिन्छ ।
मुस्ताङमा प्रत्येक वर्ष मनाइने तिजी पर्वको आफ्नै महत्व रहेको छ ।